Micheal Keating oo Lakulmay Gen;Samora Yuunis. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Addisabeba(FMN)-Ergayga gaarka ah ee Xoghayaha guud ee qaramada midoobay uqaabilsan Soomaaliya Mudane;Micheal Keating ayaa maanta magaalada Addisabeba ee Caasimada u ah dalka Itoobiya kula kulmay Taliyaha guud ee ciidamada difaaca qaranka Itoobiya Gen;Samora Yunis Maxamed.
War qoraal ah oo uu soo dhigay barta uu Twitterka ku leeyahay ayuu ergaygu ku sheegay in isaga iyo Generaalku ay ka wada hadleen arimaha ammaanka iyo xasiloonida ee dalka Soomaaliya,gaar ahaana kaalinta ay Itoobiya ku leedahay Ciidamada Nabad ilaalinta ee AMISOM.
Ergayga ayaa sidoo kale Ciidamada Itoobiya ku ammaanay ka qeybgalkooda howlgalka Nabad ilaalinta ee Soomaaliya isaga oo sidookalena ku booriyay in ay gacan ka geystaan xoojinta ciidamada qaranka Soomaaliya si ay ula wareegaan ammaanka Dalkooda.
Ciidamada kasocda wadamada afrika ee Nabad ilaalinta ujooga Soomaaliya ee AMISOM loo yaqaano ayaa la filayaa in bilawga sanadka 2018 ay si dhamaystiran uguda galaan fulinta qorshahooda ka bixitaanka Soomaaliya,kadib muddo 10 sano kabadan oo ay halkaasi ka hiwl-galayeen.
Ugu danbayn waxaa addisabeba ka socda kulan ay leeyihiin bah wadaagta Nabadaynta Soomaaliya kaas oo diirada lagu saarayo sidii ay Ciidamada AMISOM uga bixi lahaayeen dalka Soomaaliya Howsha ay hayaana ugu wareejin lahaayeen Ciidamada qaranka Soomaaliya.
Previous Previous post: Magacyada Madaxdii Afrika Ugu Xukunka Dheeraa.
Next Next post: Guddoomiyihii Lagaaday!-Maqaal.W/Q:-Cabdirisaaq Macalin Cilmi